कब्जियत भएको छ ? निको हुन अब अपनाउनुहोस् यी ५ सरल उपाय – Interview Nepal
कब्जियत भएको छ ? निको हुन अब अपनाउनुहोस् यी ५ सरल उपाय
काठमाडौं । कब्जियत भनेको मल त्याग्दा आउने समस्या हो । यो आम समस्या हो र जुन उमेरका मान्छेलाई यसले सताउन सक्छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ७ हजार ३६८ जनामा कोरोना पुष्टि, १४५ जनाको मृत्यु
बाग्लुङको तमानखोला गा.पा. मा थपिए एकै दिनमा २१ कोरोना संक्रमीत